स्वास्थ्य मन्त्रालयको नर्सिङ शाखा, मन्त्रीको छेउमै तर पाखा…. | Nepali Health
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नर्सिङ शाखा, मन्त्रीको छेउमै तर पाखा….
२०७२ चैत २२ गते १९:५२ मा प्रकाशित
काठमाडौँ – दुरीको हिसावले स्वास्थ्य मन्त्रीको कार्यकक्षबाट सबैभन्दा नजिक पर्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको नर्सिङ सेवा शाखा । तर त्यो शाखाको काम र गतिविधि हेर्दा सबैभन्दा पुछारमा परेको देखिन्छ ।
शाखा प्रमुखको रुपमा विगत छ बर्ष देखी एघारौँ तहकी नर्स इश्वरी देवी श्रेष्ठ रहेकी छन् । तर उनको काम मन्त्रालयमा कोरम पुरयाउने बाहेक खासै देखिदैन् । उनी आफै पनि अधिकार विहीन पदको प्रमुख भएको बताउछिन् ।
‘म नर्सिङ हेर्न भनेरै तोकिएको प्राविधिक हुँ तर मलाई कसैले खोजी गर्दैन । त्यसैले म पनि कतै चासो दिएर गएकै छैन् । मिटिङ सिटिङ हुन्छ, त्यसमा आफ्नो धारणा राख्ने हो । काम गर भने गर्ने हो । काम गर्नैै दिदैन भने त झगडा गर्न जाने कुरा भएन् । थपक्क बस्ने हो ।’
उनले आफूलाई देशभर कति नर्सिङ दरवन्दी छ भन्ने पनि थाह नभएको बताइन् । ‘रिक्त भएको होला त्यसैले अहिले भकाभक करार र अस्थायीमा विज्ञापन आवहान गरेको रहेछ । मलाई थाह भए अनुसार सरकारी अस्पतालमा छ हजार र विकास समितिले नै राखेकाको संख्या १२ हजार जति होला,’ श्रेष्ठले अनुमानको भरमा भनिन् ।
उनले आफ्नो शाखाको काम अन्यन्त्रबाटै हुने भन्दै आफूलाई आफ्नो कामबारे केही जानकारी नै नभएको दावी गरिन् । उनलाई आफ्नो अधिकार कटौती गरिएको गुनासो छ । खासगरी नर्सिङ सेवा तर्फको काममा अन्य शाखाबाट काम भइरहेको भन्दै उनले आफुहरुबीच समन्वयको अभाव भएको बताइन् ।
त्यसो त ६ बर्ष देखी प्रमुख रहेकी श्रेष्ठले नर्सिङ सेवा विकासका लागि देखिने काम गर्न सकेकी छैनन् । यद्धपी उनी आफू लागि रहेको बताउछिन् । ६ बर्ष देखी प्रमुख हुँदा नर्सको विबरण दिन पनि सक्नुहुँदो रहेनछ ? नेपाली हेल्थको अन्तिम प्रश्नमा उनले भनिन् , ‘म प्रमुख हुँ , मैले विवरण खोज्दै हिडने कुरा आएन् । तलका( कर्मचारी प्रशसन) ले ल्याएर दिदैन् ।’
सिक्कलसेलको उपचार गर्न १० वटा अस्पताल सूचीकृत
जाजरकोटमा फेरी देखियो झाडापखाला, दर्जनौँ बिरामी